एमाले विभाजनसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सम्पत्तिमा भाग खोज्ने! « News24 : Premium News Channel
एमाले विभाजनसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सम्पत्तिमा भाग खोज्ने!
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) विभाजनसँगै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले एमालेसँग भएको सम्पत्तिमा पनि भागवण्डा खोज्ने तयारी गरेको छ । दल विभाजन हुँदा सम्पत्तिमा लाग्ने हकदाबीबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले दल दर्ता गरेर छुट्टिएको माधव नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सम्पत्तिमा कानूनी दाबी गर्ने आधार खोज्न थालेको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पूर्वपार्टीको सम्पत्तिमा राजनीतिक रूपमा दाबी कायम रहेको, तर कानूनी दाबी गर्ने कि नगर्ने विषय भने अध्ययनपछि मात्र टुंगो लाग्ने बताएको छ । राजनीतिक दल पूर्णतया विघटन भएको खण्डमा सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । तर, विभाजन भएको खण्डमा के गर्ने ? भन्ने बारेमा ऐन कानूनमा नहुँदा भने यो समूह अन्योलमा छ ।
उसो त यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी विभाजन हुँदा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अलग्गिएको पार्टीले माओवादीसँग रहेको सम्पत्ति सहमतिको आभारमा भागवण्डा लिएको थियो ।
यसपटक माधव नेतृत्वको पार्टीले एमालेसँग अंश लिनेगरी आन्तरिक छलफल थालेको छ । सो विषयमा कानूनी अस्पष्टता भएकाले कानूनी जानकारहरसँगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ ।